September 2018 - Page 4 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay heshiis la gaareen Dowladda Federaalka Soomaaliya. “Kadib wadahadalo dhexmaray madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxda Dowladda Federaalka waxaa laga heshiiyay tabashooyinkii gaarka ahaa ee Hirshabeelle ay […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa laga yaabaa in ay lumiso mashruuc labaad oo muhiim ah sababtoo ah muran ka dhaxeeya labo haayadood oo dowladda katirsan, sida uu sheegay xildhibaan. Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland Cabdikariim Xuseen Guure […]
September 16, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay Muqdisho, sida ay sheegeen laamaha ammaanka. Qaraxa ayaa lagu xiray gaariga xildhibaan Maxamed Mursal Boorow xilli uu marayay gudaha Muqdisho fiidnimadii […]
September 15, 2018 Puntland Mirror 0
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirka ay ku dhawaad 70 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ku dileen gudaha Soomaaliya. Warbaahinta dowladda ku dhow ee Fana ayaa sheegtay in duqeynta uu ujeedkoodu ahaa in […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowlad Goboleedyada Soomaaliya ayaa shuruudo ku xiray wadahadalka Dowladda Federaalka Soomaaliya. Bayaan ay soo saareen Jimcaddii ayay ku sheegeen in ay soo dhaweynayaan wadahadal iyo wadaxaajood lagu dhammeeyo khilaafka u dhaxeeya Dowladda Dhexe […]